Izinhlobo ze akhawunti ye forextime
Izinketho zokukhetha ze sp500
I singapore ye forex yomhlaba jikelele
Izinhlobo ze akhawunti ye forextime - Akhawunti izinhlobo
Inqubomgomo Yemfihlo Kugcine ukubuyekezwa 18 Disemba ( buka izinhlobo ezilondoloziwe ) ( Izibonelo ze- hyperlinked ziyatholakala ekupheleni kwaleli dokhumenti. Izinhlobo ze akhawunti ye forextime.
Ngokususelwe kulezo zinhlobo zemibiko, khetha izimvume. Ngena ngemvume ku- Play Console yakho.
) Ziningi izindlela ongasebenzisa ngazo izinhlelo zethu – ukucinga kanye nokwabelana ngolwazi, ukuxhumana nabanye abantu noma ukwenza izinto ezintsha. Kumenyu engakwesokunxele, chofoza Impendulo yomsebenzisi > Impendulo ye- Beta.
Nquma ukuthi ufuna ukuyihlola kanjani impendulo yakho. Khetha izilungiselelo > Ama- akhawunti omsebenzisi namalungelo > Mema umsebenzisi omusha. Siphinda sisebenzise amakhukhi aqanjwe ngokuthi ' AID, ' i- ' DSID, ' ne- ' TAID', asetshenziselwa ukuxhuma umsebenzi wakho kumadivayisi onkana uma ngaphambilini ungene ngemvume ku- akhawunti yakho ye- Google kwenye idivayisi. Isihlungi : Ukuze ubone impendulo ye- beta kusukela kusimo sokunquma esithile esifana nedethi, ulwimi, isimo sokuphendula, inguqulo yohlelo lokusebenza, idivayisi, nokuningi, khetha kusukela kuzihlungi ezitholakalayo.
Ungaphatha ezinye izilungiselelo zobumfihlo manje, uphinde ufinyelele kuzilawuli eziningi zobumfihlo nezokuvikela uma ungena ngemvume noma udala i- akhawunti ye- Google. Uma une- akhawunti ye- Google ungalanda okuqukethwe okulondolozwe ku- akhawunti yakho ukuze ukusebenzise kwamanye amasevisi, noma usethe isiphathi se- akhawunti engasebenzi ukuvumela umethembeki ukuthi alanda okunye kwakho okuqukethwe esimeni lapho i- akhawunti ishiywe ingagadiwe.
I- akhawunti yakho ye- Google ikunikeza ukufinyelela okusheshayo kuzilungiselelo namathuluzi okuphatha umuzwa wakho we- Google kumikhiqizo efana Nosesho Namamephu. Namathisela noma thayipha ikheli le- imeyili eliphathelene ne- akhawunti yakho yesevisi.
Isinyathelo 2: Engeza isevisi ye- akhawunti ku- Play Console yakho. Senza lokhu ukuhlanganisa izikhangiso ozibonayo kuwo wonke amadivayisi futhi silinganisa imicimbi yokuguqulela.
Ukuguqula iphasiwedi ye- akhawunti yakho; Ukumisa okwesikhashana noma avale ukufinyelela kwakho e- akhawuntini yakho; Ukuthola imininingwane ye- akhawunti yakho ukuze kugculiseke imithetho efanele, imigomo, izinqubo zomthetho noma izicelo zokuphatha ezingaphumelela.
I top 10 ye forex indicator ayilayishwa mahhala
Ihokheji elisha lokuhweba umthengisi
I forex atr ithatha inzuzo
I forex nsuku zonke yezindlela zokuhweba zohwebo
Amasu wokuhweba ngosuku lwe youtube forex